Otu esi etinye Slack na Pop!_OS 20.04 - LinuxCapable
Usoro 1. Wụnye Slack na APT Manager
Usoro 2. Wụnye Slack na Snap (Snapcraft)
Usoro 3. Wụnye Slack na Flatpak
Otu esi ewebata onye ahịa Slack
N'ime nkuzi a, ị ga-ama otu esi etinye usoro nkwukọrịta Slack na Pop!_OS 20.04.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa dabara adaba nke ebe nchekwa Pop_OS 20.04 nyere. Nke a bụ ụdị kwụsiri ike yana echekwara yana ọtụtụ akwadoro.
Ozugbo etinyere ya, kwado nrụnye ahụ site na ịlele apt-cache amụma na Slack.
A na-ejikwa ọkọlọtọ emelite mmelite dabara adaba & kwalite iwu na esịtidem n'ime ngwa.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye Slack na APT, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
Na-esote, wụnye ngwugwu Slack site na iji snap:
Dịka n'elu, nke a na-agwa gị na etinyere Slack nke ọma yana nọmba ụdị.
Ka ilele akara ngosi Slack, ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esote.
Ileghara ihe dị n'elu anya ma ọ bụrụ na akara ngosi Slack dị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ahụhụ a nwere ike ime mgbe ị na-etinye ngwugwu ọhụrụ.
Ugbu a tinye Slack site na iji iwu flatpak a:
Iji wepu ụdị Flatpack nke Slack, mee iwu a:
Ugbu a ị nwere onye ahịa Slack arụnyere, enwere ike ịme mmalite n'ụzọ abụọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite Slack wee jiri ọdụ, ziga ya na ndabere:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Slack. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị mepee Slack, ndị a ga-ekele gị.
Biko mepụta akaụntụ ọhụrụ, ma ọ bụ jiri akaụntụ gị dị ugbu a banye, nke ahụ bụkwa ya. Awụnyela Slack na desktọpụ gị nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ịwụnye Slack na Pop!_OS 20.04 site na iji ụzọ atọ. Nke kacha akwadoro bụ ụdị APT ma ọ bụ Flatpak. Awụnyere ndị njikwa ngwugwu abụọ a na Pop!_OS 20.04, ebe Snap bụ onye mbịarambịa.
Categories Pop! _OS Tags POP! _OS 20.04, slack Mail igodo